आइतबार मे 16, 2021 |
आइतबार मे 16, 2021
विषय — मृत्युदण्ड र अमर
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी6: 23
“"परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मूल्य रहित उपहार दिनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 116 : 1, 2, 6-9
1 जब परमप्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नु हुँदछ त्यो मलाई मन पर्दछ।
2 जब मैले गुहार माग्दा उहाँले मलाई सहाएता दिनुहुन्छ त्यो मलाई मन पर्छ।
6 परमप्रभुले असहाय मानिसहरूको हेरचाह गर्नु हुन्छ। म असहाय थिएँ अनि परमप्रभुले मलाई बचाउनु भयो।
7 हे मेरो प्राण, विश्राम गर! परमेश्वरले तिमीलाई हेरचाह गरिरहनु भएको छ।
8 हे परमेश्वर, तपाईंले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो। तपाईंले मेरो आँसुहरू थामिदिनु भयो। तपाईंले मलाई पतन हुनदेखि जोगाउनु भयो।
9 जीवितहरूको देशमा पनि म परमप्रभुको सेवा अनवरत गर्नेछु।
1. भजनसंग्रह 23: 1-6
1 परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई खाँचो परेका सबै थोकहरू पाउनेछु।
2 उहाँले मलाई हरियो घाँसको चौरमा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई शान्त तलाउतिर लानु हुन्छ।
3 उहाँले आफ्नै नामको लागि मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिकताको बाटोतर्फ डोराउनु हुन्छ।
4 यदि म चिहानभन्दा पनि अन्धकार-खाडी भएर हिंडे पनि, डरले रातभरी पनि र्तसने छैन। किन? किनभने हे परमप्रभु, तपाईं मसँग हुनुहुन्छ। तपाईंको लाठ्ठी र लौरोले मलाई सान्तवना दिंदछ।
5 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो शत्रुहरूका समक्ष मेरो निम्ति भोजन तयार पारिदिनु भयो, अनि तपाईंले मेरो शिरमा तेल हाल्नु भयो।मेरो कचौरा चुलिन्छ र पोखिएर बगिरहनेछ।
6 मेरो जीवनको अन्तसम्म करूणा र भलाई मसँगै रहने छ, अनि म परमप्रभुको मन्दिरमा संधैको निम्ति बस्नेछु।
2. यूहन्ना3: 1-12
8 तर हावा कहाँबाट आउँदछ र कतातिर गइरेहछ तिमी जान्दैनौ। यसर्थ मान्छे त्यसतै हूँदछ जो आत्माबाट जन्मन्छ।
9 निकोदेमसले सोधे, “यी सबै कसरी सम्भव हुनसक्छ?
3. 1 यूहन्ना5: 5, 11, 13, 20
4. 1 तिमोथी 1: 12 (म)-17 (तिर 1st.)
12 हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूलाई म धन्यवाद दिंदछु किनभने उहाँले मलाई विश्वास गर्नु भयो र उहाँको सेवा गर्ने यो काम मलाई दिनुभयो। उहाँले यो गर्न मलाई शक्ति दिनुभयो।
13 अघि-अघि म ख्रीष्टको विरुद्ध बोल्थें, उहाँलाई सताउँथें र उहाँलाई चोट लाग्ने काम-कुरो गर्थे। तर परमेश्वरले ममाथि कृपा गर्नुभयो किनकि म के गर्दै थिएँ त्यसबारे म अज्ञानी थिएँ। मैले सबै यस्ता कुराहरू त्यस बेला गरें जब मेरो ख्रीष्ट प्रति विश्वास थिएन।
14 तर मैले पूर्णरूपले उहाँको अनुग्रह पाएँ। अनि त्यही अनुग्रहसित ख्रीष्ट येशूमा प्रेम अनि विश्वास पाएँ।
15 म जे भन्दैछु त्यो सत्य हो अनि तिमीले यसलाई पूर्णरूपले स्वीकार गर्नुपर्छः ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई बचाउनु यस संसारमा आउनुभयो। म पापीहरूमा पनि महापापी हुँ।
16 तर म प्रति कृपा यसकारणले देखाइयो कि ख्रीष्ट येशूले उहाँका अनन्त धैर्य ममा देखाउन सक्नुभयो। ख्रीष्टले म प्रति ठूलो धैर्य देखाउनु भयो जो पापीहरू मध्ये निकृष्ट थिएँ। ख्रीष्टले मलाई तिनीहरूका निम्ति एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुभयो। जसले भविष्य प्रति विश्वास गर्छ अनि अनन्त जीवन चाहन्छ। तिनीहरूको निम्ति ख्रीष्ट मलाई एक उदाहरूण बनाउन चाहनु हुन्थ्यो।
17 जसले सदा-सर्वदा शासन गर्छन्, सम्मान अनि महिमा उनै राजा प्रति होस्। उहाँको अस्तित्व मेटाउन सकिंदैन अनि देख्न सकिंदैन। एकमात्र परमेश्वर प्रति सदा सर्वदा सम्मान अनि महिमा रहोस्। आमिन।
5. 1 कोरिन्थी 15: 50-57
6. प्रकाश 21 : 2
7. प्रकाश 22 : 1, 2, 14
14 ती मानिसहरु धन्य हुनेछन् जसले आफ्ना वस्त्रहरु सफा धुन्छन्। जीवनको रुखबाट फल खाने अधिकार तिनीहरुले पाउनेछन्. तिनीहरु नगरका ती ढोकाहरुबाट पस्छन्।
8. प्रकाश2: 7
7 स्मर्नाको मण्डलीका स्वर्गदूतलाई यो लेख“तिनी एक जो आदी अनि अन्त हुन् तिमीहरुलाई यो कुरा भन्दैछन्। उनी नै एक हुन् जो मरे अनि फेरि मृत्युबाट जीवनमा फर्की आए।
1. 42 : 26 (भित्र)-28
... इसाई विज्ञानमा साँचो मानिस परमेश्वरद्वारा संचालित हुन्छ - असलले, नराम्रोले होइन - र त्यसैले यो मर्त्य होइन तर अमर हो।
2. 434 : 31 (भगवान)-32
परमेश्वरले मानिसलाई अमर र आत्माको लागि मात्र योग्य बनाउनुभएको छ।
जीवन अनन्त छ। हामीले यो फेला पार्नुपर्छ र यसको प्रदर्शन सुरु गर्नुपर्छ। जीवन र भलाइ अमर छ। त्यसोभए हामी अस्तित्वका बारे हाम्रो विचारहरू प्रेम र ताजाता, र निरन्तरतामा बदल्नुहोस्, बरु उमेर र अन्धकारमा।
भगवानले मानिस सहित ब्रह्माण्डको सृष्टि र शासन गर्नुहुन्छ। ब्रह्माण्ड आत्मिक विचारहरूले भरिएको छ, जुन उहाँ विकसित हुनुहुन्छ, र तिनीहरू उनीहरूले दिमागमा आज्ञाकारी छन्। नश्वर दिमागले आध्यात्मिकलाई भौतिकमा परिणत गर्दछ, र त्यसपछि यो त्रुटिको मृत्युबाट बच्नको लागि मानिसको वास्तविक स्वस्थता पुनः प्राप्त गर्दछ। मुर्दाहरू अमर जस्तो हुँदैनन्, भगवानको आफ्नै छविमा बनाइएको; तर असीम आत्मा सबै नै हो, नश्वर चेतना अन्तमा वैज्ञानिक तथ्यको लागि उपज हुनेछ र हराउनेछ, र वास्तविक, पूर्ण र सदासर्वदाको वास्तविक भावना प्रकट हुनेछ।
विज्ञानमा प्रकट गरिएको परमेश्वरको समानतामा मानिस अमर हुन मद्दत गर्न सक्दैन। यद्यपि भौतिक ज्ञानको परिणामस्वरूप इनहरमनीले विज्ञानको सद्भावलाई लुकाउँछ, अवरोहणले विज्ञानको ईश्वरीय सिद्धान्तलाई नष्ट गर्न सक्दैन। विज्ञान मा, मानिस को अमरत्व भगवान मा निर्भर गर्दछ, राम्रो, र राम्रो को अमरत्व को एक आवश्यक परिणाम को रूप मा अनुसरण गर्दछ।
मोर्टल्स अमरको जालसाजी हो। तिनीहरू दुष्ट वा एक दुष्टका सन्तान हुन्, जसले घोषणा गर्दछ कि मानिस धूलोमा वा भौतिक भ्रुणको रूपमा सुरू हुन्छ। ईश्वरीय विज्ञान मा, परमेश्वर र वास्तविक मानिस ईश्वरीय सिद्धान्त र विचार को रूप मा अविभाज्य छन्।
त्यसकारण मानिस नश्वर हो न भौतिक हो। नश्वरहरू हराउनेछन्, र अमर हुन्छन्, वा परमेश्वरका सन्तानहरू, मानिसका एकमात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देखा पर्दछ। मृत्युदण्डहरू परमेश्वरका छोराहरू होइनन्। तिनीहरूको अस्तित्वको कहिल्यै सिद्ध अवस्था थिएन, जुन पछि पुन: प्राप्त हुन सक्छ। तिनीहरू मृत्युको इतिहासको शुरुदेखि नै "पापमा गर्भधारण भएको थियो र अधर्ममा जन्मिएको थियो।" मृत्युलाई अन्ततः अमरत्वमा निल्छ। पाप, बिमारी, र मृत्यु अमर मानिससँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई ठाउँ दिनको लागि अदृश्य हुनुपर्दछ।
जब मानिसका सन्तान होइन, परमेश्वरका छोराहरूको बारेमा कुरा गर्दै, येशूले भन्नुभयो, "परमेश्वरको राज्य तिमीहरूभित्रै छ।" त्यो हो, सत्य र प्रेमले वास्तविक मानिसमा शासन गर्दछ, जसले त्यो देखाउँदछ कि परमेश्वरको स्वरूपमा मानिस अभिव्यक्त भएको छ र अनन्त छ।
8. 435 : 12 (राम्रो)-14
... राम्रो काम अमर हो, दुःखको सट्टा आनन्द, दु: खको सट्टा खुशी, र मृत्युको सट्टा जीवन।
मानव जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, र क्षय सुन्दर हरियो ब्लेडहरु संग माटोबाट वसन्त घाँस को रूप मा छ, पछि सुक्खा र आफ्नो मूल शून्यता मा फर्कने। यो नश्वर देखिन्छ अस्थायी छ; यो कहिल्यै अमर अस्तित्वमा विलीन हुँदैन, तर अन्तमा अदृश्य हुन्छ, र अमर मानिस, आध्यात्मिक र अनन्त, वास्तविक मानिस पाउन सकिन्छ।
"मृत्युको चुरोट पाप हो; र पापको सामर्थ्य व्यवस्था हो", - अमर जीवनको तथ्यहरूसँग लडाईमा मृत्युको विश्वास, "चिहानलाई भनिएको आत्मिक व्यवस्थाको साथ पनि," तपाईको जीत कहाँ छ? तर "जब यो विनाशकारीले अविनाशी धारण गर्छ, र यो नश्वरले अमरत्व धारण गर्दछ, तब यो भनाइलाई भन्ने छ, "विजयमा मृत्यु निलियो।"
महान आत्मिक तथ्यलाई बाहिर निकाल्नुपर्दछ कि मानिस, सिद्ध र अमर हुनेछैन। हामीले सदाको लागि अस्तित्वको चेतना राख्नुपर्दछ, र ढिलो वा चाँडो, ख्रीष्ट र इसाई विज्ञान मार्फत हामीले पाप र मृत्युमा निपुण हुनुपर्दछ। मानिसको अमरत्वको प्रमाण अधिक स्पष्ट हुन्छ, किनकि भौतिक विश्वास छोडिन्छ र अमर तथ्यहरू स्वीकार गरिन्छ।
पापरहित आनन्द - एक मात्र शारीरिक सुख वा पीडा बिना असीमित ईश्वरीय सुन्दरता र भलाइको जीवनको पूर्ण सद्भाव र अमरत्व - एक मात्र सत्य, अविनाशी मानिस, जसको अस्तित्व आध्यात्मिक हो गठन गर्दछ। यो अस्तित्वको अवस्था वैज्ञानिक र अक्षुण्ण छ - केवल ईश्वरीय विज्ञानमा ख्रीष्टको अन्तिम समझ हुनेहरूले मात्र यो सिद्धता बुझ्न सकिन्छ। मृत्युले यस अस्तित्वको अवस्थालाई कहिल्यै हतार गर्न सक्दैन, किनकि मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ, अमरत्व देखा पर्नु अघि, प्रस्तुत गर्नु हुँदैन।
जब बिरामी वा पापको भ्रमले तपाईंलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारणामा स्थिर रहनुहोस्। उहाँको समानता बाहेक अरू केहि पनि तपाईंको विचारमा रहन अनुमति दिनुहोस्। न त डर वा श your्काले तपाईको स्पष्ट समझ र शान्त विश्वासलाई साघुँरो पार्नुहोस्, कि जीवन को पहिचान सामञ्जस्य - अनन्त जीवन छ - को कुनै पनि दर्दनाक भावना, वा विश्वास, जो जीवन छैन को नष्ट गर्न सक्छ। ईसाई विज्ञान, शारीरिक ज्ञानको सट्टा, तपाईंको हुनुको तपाईंको समझलाई समर्थन गर्नुहोस्, र यो समझ सत्यको साथ त्रुटि बढाउनेछ, अमरत्वको साथ मृत्युदरलाई प्रतिस्थापन गर्दछ, र सद्भावको साथ विरोधाभासलाई सुसंगतताका साथ।
विज्ञानले अमर मानिसका गौरवशाली संभावनाहरू प्रकट गर्दछ, नश्वर संवेदनाहरूले सदाको लागि असीमित।